Igwe igwe flake
Igwe Igwe Ice
Akụrụngwa Nnyefe Ice
Ngwa eji atụ ihe ice
Ileba anya oru ngo
Ụlọ ọrụ ice na -eri nri na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ
1 setịpụrụ igwe ice 40T tube nwere ihe nchekwa ihe. Site na njikwa njikwa na ndị otu nyocha siri ike, igwe snowkey tube ice kwekọrọ n'ụkpụrụ nchekwa nri ma nwee ogologo ndụ na ndozi oge niile. Tube ice dị ọcha ma na -apụ apụ. A na -ejikarị ya eme nri dị ka onye na -eme achịcha.
Igwe mmiri flake na ụgbọ mmiri (maka mmiri oke osimiri)
Maka ọrụ azụmaahịa azụmaahịa ọgbara ọhụrụ, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri ga -anọrịrị ụbọchị ma ọ bụ ọbụna ọnwa n'oké osimiri. Nsogbu nke enweghị ice iji mee ka azụ dị ọhụrụ na -abụkarị maka ha. Ezubere igwe ice ice flake mmiri mmiri iji dozie nsogbu a. Ndị ọkụ azụ nwere ike tinye ice ha mepụtara na b ...
Sistemụ jụrụ oyi zuru oke nke Snowkey
Ụlọ ọrụ Fujian Snowman Co., Ltd. ltd, tọrọ ntọala na 2000, na -eto eto site na nzọ ụkwụ, wee bụrụ ụlọ ọrụ ijikọ ụwa ọnụ na -ahụ maka imepụta igwe ice, ngwa jụrụ oyi na ebe nchekwa oyi, ọkachasị na igwe ice na ebe sistemụ jụrụ oyi, òkè ahịa n'ọhịa a, SNOWKEY bụ nke kacha elu 1 na Ch ...
Chekwaa akwụkwọ nri na ice flake
Ice flake: azịza zuru ụwa ọnụ maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ nri, kamakwa maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ na ntụrụndụ! Flake Ice Njirimara • A kpụrụ ya ozugbo na obere okpomọkụ, kpụkọrọ akpụkọ kpụkọrọ akpụkọ na-ajụ oyi-8 ℃ • Ozugbo etinyere ya, flakes ice kpọrọ nkụ, dị ọcha, mara mma n'ụdị, ịdị ọcha na ịdị mma ...
2021 Ihe ngosi friji China
Isiokwu nke ngosi ihe ngosi friji China nke 2021 bụ "Iwusi ntọala ike, ịdị mma nke mbụ, njikọta ime na mpụga, mmepe obere carbon". Ndị otu Snowman na -ekerịta isiokwu nke anyị nke "okirikiri okpukpu abụọ", "nnọpụiche carbon", "ụkpụrụ ọhụrụ", "n'okpuru ọnọdụ ọhụrụ", na "friji ...
Nkọwapụta nke igwe icekey tube ice
Nhazi usoro mmiri pụrụ iche na -ahụ maka ịdị mma ice, ọbụlagodi oke, nghọta na ịdị ọcha. ● Onye na -eme ice kpụrụ ma rụpụta ya dịka ọkọlọtọ ụgbọ mmiri siri dị, siri ike, dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. A na -anabata ọkpọkọ mbufe ọkụ na -arụ ọrụ nke ọma ka ebuli atụmatụ nke ngwa nju oyi ...
Ntinye nke igwe ice tube
1. Nzọụkwụ nke ibuli na ibudata ebe ọ bụ na igwe igwe akpụrụ akpụ dị oke arọ, anyị na -achọ ka ndị ọrụ anyị nye ụlọ ọrụ mbuli na mbupu n'oge nbudata na ịkwaga dịka ntuziaka ndị a siri dị: 1) Mgbe ị na -ebudata igwe ice dị otú ahụ. ugbo ala dika van na tr ...
Kedu otu esi ahọrọ igwe mgbochi jụrụ oyi dị mma ozugbo?
Ngọngọ akpụrụ akpụ bụ ụdị onye na -eme akpụrụ mmiri, nke kewara n'ime igwe jụrụ oyi jụrụ oyi na mmiri nnu na -egbochi igwe ice. Mkpọchi ice a na -emepụta bụ nke buru ibu n'etiti ngwaahịa akpụrụ. Mkpọchi ice na -ebu ibu, na -adịkarị ala, anaghị adị mfe agbaze, dị mfe ibufe, yana ogologo nchekwa ...
Kedu otu esi eme ICE IKE?
Snowkey Block Ice Machine A na -awụpụ mmiri ahụ n'ime nnukwu igwe wee tinye ya na nnukwu tank nke nwere brine jụrụ oyi ruo awa 8. Mgbe ice kpụkọrọ akpụkọ kpamkpam, a na -ewepụ ha na tank wee mikpuo n'ime mmiri ọkụ. Nke a na -agbaze elu nke ...
Kedu otu a ga -esi na -edebe azụ?
Nkwakọba ihe nhazi mmiri mmiri snow na -amalite ozugbo azụtara azụ ahụ. Ịdị ọhụrụ na -apụ n'anya n'oge na -adịghị anya. Agbanyeghị, ma nje bacteria na akpaaka autolytic na-apụtakarị n'oge ụfọdụ okpomọkụ Dịka ọmụmaatụ, nje na enzymes dị na azụ sitere na mmiri oyi, na-emegharị ka oke osimiri dị n'etiti 5 ° C- 10 ° C. ...
Mmiri maka ịme ice na ịkụ azụ
site na nchịkwa na 20-12-30
Ekwesịrị ịme ice mgbe niile site na mmiri nke dabara ị drinkụ. Mmiri nke ekwesighi ị drinkụ ga -enwe chinchi ndị na -emerụ ahụike anyị. Ihe ndị a ga -ebute azụ ahụ ka ice na -agbaze. Mgbe ezigbo mmiri dị ụkọ ma ọ bụ na ọ nweghị, enwere ike iji mmiri mmiri kama. Agbanyeghị, pro ...
Kedu ụzọ ziri ezi iji ice maka azụ azụ?
Snowkey Flake Ice Machine Azụ nwere akpụrụ mmiri n'ihi ihe abụọ: • Iji wepu okpomọkụ na azụ wee mee ka ọ dị jụụ ruo 0 Celsius; • Iji wepu okpomọkụ na -abanye akpa azụ site na gburugburu. Otú ọ dị, a ga -ahapụrịrị oge ka azụ a kwụsị okpomọkụ. Ọzọkwa, ogologo nke azụ dị na ...
Ụlọ ọrụ Fujian Snowman Co., Ltd.